I-Recipe Saladi kunye nenkomo kunye ne-radish
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Imifuno Isalathisi
Silungiselela isaladi yomsila omnyama kunye nenkomo. Ukuba siwahlula ialadi kwi "ndoda" kunye ne "saladi" yamasaladi, ke isaladi yethu yimivuzo yomntu. Unomthwalo, unzima, ubukhali kwaye ukhangeleka ngokukhawuleza. Kwimeko nayiphi na into, ngokuqinisekileyo amadoda aya kuyithanda, ingakumbi kulabo abajika iindlovu zabo "ngotshani" ukuba umfazi wakhe ohlala ekudleni unomdla wakhe. Kubantu, ukutya okunesondlo kubaluleke ngakumbi kunabesifazane, kwaye akukho namnye wabo oya kunika isilwanyana esihle. Ukuba usaphila ukwenza ukondlo lwamafutha akho luncedo ngakumbi, ke esikhundleni sokutya kwesitya sepatata ukuya kweso siqwenga senyama silungiselela isaladi yethu kunye nomsila omnyama. Esi saladi sinempendulo kuphela: emva kokutshatyalaliswa emva kokuba israyi ihlala ixesha elide, okubangela ukuba umboleki kunye nabantu abakuzungezile. Ukuze ugweme oku, ungaqhubeka kanje. Emva kokugubungela i-radish kwi-grater enkulu, isasaze ngokucwangcisa kakhulu kwisitya uze ushiye iiyure eziliqela ukuba ube yi-weathered. Oku kuya kwandisa ixesha lokupheka kweladidi, kodwa kuya kukuvumela ukuba ungakhathazeki ngemiphumo. Le saladi iya kuthandwa kakhulu nakwabantu abangenalo i-radish nakwezinye izitya.
Inyama yenkomo 200g
I-Radish emnyama 1 pc.
IMayonnaise 2 tbsp. l.
I-Pepper ecocekileyo ama-5.
Inyathelo 1 Ukulungiselela isaladi udinga i-pulp yenkomo yenkomo okanye i-veal, intloko encinane ye-anyanisi enombala obomvu, israyi ebomnyama, i-mayonnaise, ityuwa kunye nepelepele.
Inyathelo 2 I-Beef preilil: ngoba le nyama ihlanjwe kakuhle, igalele amanzi atshisayo, yongeza i-pepper ecoliweyo, iqabunga le-bay kunye ne-pinch ityuwa. Yizisa kwi-thumba uze upheke ukushisa okuphantsi kwe-1-1.5 iiyure. Emva koko yitshisa inyama.
Inyathelo lesi-3 Hlanza kwaye uxolele isithombo kwi-grater.
Isinyathelo 4 Gweba i-anyanisi uze uthathe amacangci amancinci.
Inyathelo 5 Yinquma inyama yenkomo kunye neentambo.
Inyathelo 6 Hlanganisa i-radish, yenkomo, i-anyanisi kunye neepunipoli eziyi-2-3 ze-mayonnaise.
Inyathelo 7 Hlanganisa kakuhle isaladi, yongeza ityuwa ukuze uyitye.
Hlonipha ngendlela yokuzila
I-Horoscope ngo-Oktobha 2017 ukusuka ePavel Globa kuyo yonke imiqondiso ye-zodiac
Yintoni i-Cosmetics yeNdalo?
I-saladi yenkukhu nge-curry sauce
Yintoni isipho sokwenza inkwenkwe eminyaka ubudala?
U-Nikolay Karachentsov waphinde wangena engozini
Ukufundisisa ngokusisigxina umntwana wehlabathi
OwuThixo, yintoni indoda: UPavel Priluchny wayemthanda umfanekiso kwiqula
Ukungqinelana komsebenzi weengcali zokuthetha kunye nabazali